Manje kukhona isimo emkhakheni Hi-tech, ukuthi ithelevishini ubuchwepheshe besimanje ngokuya ezidingekayo ezisebenza liyafana ikhompyutha ejwayelekile. Lokhu akuyona into yesikhashana, kodwa ngokudingeka nokhahlo. Futhi uma nobukhulu nekhwalithi kwesikrini, yonke into icacile (nakhu, a priori, ukuba phezulu), khona-ke kusukela luyingxenye ezikhethekile, ikhompyutha imisebenzi akuzona ngakho konke kucacile.
Thatha isibonelo esakhelwe esipheqululini, ngokuphuma singena ezingosini ze lapho elawulwa kude, futhi i-Internet khona, lunikezelwa umnikezeli ngobuchwepheshe obungenawaya-Wi-Fi. Ngakho le ndlela ngempela ngakho ziphoqa? Isimanga siwukuthi kuthandwa kakhulu. Into wukuthi abasebenzisi abaningi abafuni kucicanise ukunakwa zakho ngemininingwane engadingekile futhi izinto. Kulula kakhulu ukubheka nesithakazelo okuqukethwe (amabhayisikobho, izinhlelo ze-TV) ngokuqondile isiphequluli inthanethi, imithombo emihle, ukusebenza kuphela HD-izinga zixhaphakile. Kulabo abakhetha ukuba nizifeze zonke imisebenzi kukhompyutha yakho, ama-TV sipho brand eziholela zisebenzisa ezivamile-memory stick. Okuqukethwe flash drive ixhunywe ku-TV ku-isixhumi se-USB, kukhona ukufunda nokudlala. Lesi sici elula kakhulu kulabo ukulandwa-movie ku-intanethi kukhompyutha yakho futhi ufuna ukubona esikrinini big. Noma kunjalo, ikhaya yaseshashalazini kulesi sici kungcono kakhulu.
Abakhiqizi panel enkulu kuthelevishini zithambekele ukwengeza zonke izinhlobo izici phezu Maxim ukuthi akukho okubi kunalokho umakhelwane. Futhi iqiniso lokuthi babe funa kancane akekho onakayo. Lapha, ngokwesibonelo ikhono ukurekhoda uhlelo lwe-TV kusuka esikrinini ngqo flash drive cishe akazange asebenzise. Futhi kancane bedidwe inkani maniacal ngawo izinhlangano ehola Samsung, Panasonic, Philips, Sony kanye nezinye izinkampani abafuna ukuhlomisa onobuhle zabo izici 3D. Akunandaba ukuthi ohlangothini technical sikude kakhulu nokuphelela. Into esemqoka ukuthi sasifana umakhelwane. Ngezinye izikhathi, basuke bethola izimo ebhekene ngempela lapho 3D - Lena akuyona ibinzana awunalutho. Hhayi ezishibhile amane nesikhombisa intshi giant Philips 47PFL6097T abashukumisela umsebenzisi ukukhetha 3D ukujula. Ngezinye imvamisa of 600 Hertz futhi izigidigidi imibala, le ndlela zizohlala funa.
Siphendukela ohlangothini ezibukwayo. Man, zikude ohlangothini lwezobuchwepheshe izinto, bangase bacabange ukuthi wonke izikrini ziyafana. Lena akuyona ngakho. Izinkampani ukutshala ephoqelela isithakazelo ekuthengisweni ekuthuthukiseni izisombululo ayo zobuchwepheshe emzamweni ukushaya lo mncintiswano. nomkhiqizi ngamunye has onobuhle iwuhlelo eziningana lapho okujabulisa yesayensi yazuza ukusebenza nokusebenzisa. Lapha futhi okusezingeni eliphezulu lozimele, futhi omuhle kakhulu umbala yokuhumusha, futhi kwabantu Amaphikseli intshi ngayinye, futhi isibalo imibala kanye matrix impendulo, nokunye. Izinga olwamukelwa yikhono hang i-LCD noma uketshezi olungenambala olusegazini-TV ngqo phezu komduli. Iyodwa into esiqiniseka ngayo. ubuchwepheshe Kwasetshenziswa Seledlulise amalawulo phambili, kodwa abakhiqizi zokuqukethwe kakhulu ngemuva.
Noma kunjalo, nokuhlanganiswa kuyinto namathelevishini singenakwenzeka futhi ama-computer, beziyoba iphutha. Uma umuntu oyedwa kungcono ukuxhumana zokuxhumana, ebambe ezandleni zakhe ithebhulethi, kanye nezinye isimo sikuvumela ukuthi uthayiphe izingxoxo ikhibhodi ideskithophu, uzodinga ukuba ufunde ingxenye yesithathu izindaba Inthanethi elele phansi phezu kombhede. TV ne-computer uzoqhubeka umphelelisi nomunye ezicini eziningi. Kodwa kukhona obangela ukukhathazeka kokubili. Kuyinto ukukhuthaza netheknoloji virtual isikhala, 3D-izibuko futhi izindlela zokukhwabanisa kule mvelo. Ukwethulwa ezintsha ezifana ziyophela ngalokho umuntu lo ukukhiqizwa panel ukusetshenziswa ngokuhlanganyela (TV, qapha).
Iphakamisa lesi siphetho. Ngaphansi kwezimo ezithile akekho uyosibonisa futhi abanye be losers. Zuza labo ngesikhathi ngeke kabusha abazokusho kokukhiqiza ithrekhi entsha.
RS-flip-flop. Umgomo we operation, imidvwebo obusebenzayo, shintsha ithebula
Ibhomu umsindo Lenovo
Kuhovini microwave umsebenzi: ukuthi kusho ukuthini futhi kusebenza kanjani?
Lawo mandla okuthonya ezifihliwe? isiphuzo Tonic - kunalokho kuyingozi empilweni?
Ukwelashwa nokuvikelwa isifuba esomile: kufika yesintu imithi ukusiza umuntu